अब यसरी सबै तहका प’रीक्षा स’ञ्चालन ग’र्न पाइने, यस्तो छ सरकारकाे ‘! तल पुरा पद्नु होस् – Halkhabar kura
२२ आश्विन २०७७, बिहीबार १४:२३
अब यसरी सबै तहका प’रीक्षा स’ञ्चालन ग’र्न पाइने, यस्तो छ सरकारकाे ‘! तल पुरा पद्नु होस्
को’रोनाका का’रण रोकिएका सबै तहका परिक्षा संचालन गर्न अब विद्यालय र क्याम्पस र सबै निकायहरुलाई बाटो खुलेको छ । को’रोनाको म’हामारीका रोकिएका विभिन्न तहका परीक्षा स’ञ्चालनका लागि सरकारले सै’द्धान्तिक सहमति दिएसंगै बाटो खुलेको हो ।
को’रोनाको जो’खिम भएका कारण अ’त्याधिक भि’डभाड हुने क्षेत्र सं’चालनका लागि सरकारले अ’नुमति दिएको छैन । विद्यालय र क्याम्पस पनि सोही क्षेत्रमा पर्ने भएकाले अध्ययन र परिक्षा समेत रोकिएका छन् । विद्यार्थीहरु ६ महिना देखि विद्यालय र कलेज जान पाएका छैनन् ।
सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मा’पदण्ड अपनाएर अब सबै तहका प’रिक्षा स’ञ्चालन गर्ने अ’नुमति सरकारले दिएको हो । बुधबार मन्त्रिपरिषदका नि’र्णय सा’र्वजनिक गर्दै सरकारको प्रवक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै तहका परीक्षा स’ञ्चालनका लागि सहमति दिएको बताए
त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्यको नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताए।
Previous डा केसीका बारेमा आज वार्ता र आन्दोलन सँगसगै हुने
Next जाने हैन अमेरिका, खुल्यो डिभी!